भिउदे खत्रीलाई कारबाही गर्न कांग्रेसकाे माग, के गर्लान् गृहमन्त्री ? » Nepal Fusion	Nepal Fusion	भिउदे खत्रीलाई कारबाही गर्न कांग्रेसकाे माग, के गर्लान् गृहमन्त्री ? » Nepal Fusion
भिउदे खत्रीलाई कारबाही गर्न कांग्रेसकाे माग, के गर्लान् गृहमन्त्री ?
२०७५ चैत्र १ गते शुक्रवार
काठमाडौं । दुई वटा नागरिकता लिएका रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीलाई कारबाही गर्नुको साटो गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संरक्षण गरेर राखेको खुलासा भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा खत्री तत्कालीन माओवादीबाट रोल्पा जिल्लाको गंगादेव गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।